Qandaraasyada TCDD ee warbixinta TCA | RayHaber | raillynews
HomeGUUDDiidmada TCDD ee warbixinta TCA
11 / 01 / 2014 GUUD, Headline, TURKEY
Hindise-sharciyeedyada TCDD ee TCA: TCA waxay ka heshay natiijooyin cajiib ah warbixinteeda ku saabsan hindisooyinka ay soo gudbiyeen TCDD, mid ka mid ah hay'adaha lagu bartilmaameedsaday mowjadaha saddexaad ee hawlgallada musuqmaasuqa. Sida lagu sheegay warbixinta, hay'addu waxay furtay hindisooyin wadarta 577 sannad gudihii. Iyada oo 96.8 milyan TL ee qandaraasyadan lagu sameeyay baaxadda Sharciga Wax Soo iibsiga Dadweynaha, qawaaniinta Sharciga Wax Soo iibsiga Dadweynaha looma tixgelin doono qandaraaska 473.9 milyan ee TL guud ahaan.
TCDD, oo ah mid ka mid ah cinwaannada mowjadda saddexaad ee musuqmaasuqa, ayaa hindisay 1 bilyan oo sannadkii hore. Marka loo eego warbixinta TCA, 96.8 milyan TL hindisooyinkan waxaa lagu gaadhay baaxadda sharciga iibka dadweynaha, 248.9 milyan ayaa laga dhaafay oo 128.2 milyan ayaa laga wada hadlay. Wadarta iibsiga 50.2 milyan ee TL waxaa lagu sameeyay soo iibsiga tooska ah. TCA ayaa soo werisay in qaababkan wax soo iibsiga ay caqabad ku noqdeen jawiga tartan.
Hawlgalkii ay fuliyeen Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee seczmir isla markaana lagu soo abaabulay gobolka 5, qofkii loo yaqaan '25' waxaa gacanta loo galiyay eedeymaha ah inay si xun u dhaqmeen hindisada isla markaana ay sameeyeen wax isdaba marin ku sameynta macaamil ganacsiyada dekedaha iyo shaqaalaha TCDD General Agaasinka shaqaalaha ayaa sameeyay 25 qofkan.
In kasta oo ay soo ifbaxeen hawlgallada, waxaa soo baxday in Maxkamadda Xisaabaadka ay haysay liis faahfaahsan oo ku saabsan xaraashka TCDD. Warbixinta ku saabsan waxqabadka 2012 ee hay'addu waxay dhalleeceeysay iibsiyadaha lagu sameeyay iyada oo laga dhaafayo, gorgortanka iyo iibka tooska ah, waxaana lagu caddeeyay waxyaabaha soo socda:
* Sanadkan gudihiisa, isugeyn hindisooyin 577 ayaa laga furay maadooyinka ku hoos dhacay awooda gudiyada iyo adeega gudiga wax soo iibsiga ee agaasinka guud ee TCDD. Awoodda qandaraasyadan, 96.8 milyan TL waxay ka hooseysaa sharciga 4734, 248.9 million TL waxay ka hooseysaa 3 / g marka laga reebo, 128.2 million TL waa la gorgortamayaa wadarta tiradaana waa TL 473.9 milyan. Intaa waxaa dheer, 50.2 milyan TL ayaa lagu iibsaday soo iibsiga tooska ah.
* Imtixaannada la xiriira soo iibsiga alaabada iyo adeegyada TCDD iyo kaabayaasheeda; Waxaa loo arkaa in inta badan wax iibsiyada lagu qanciyo hindisooyin furan iyo gorgortan iyo qaabab iibsi toos ah marka loo eego baaxadda xeerarka iibka ee la waafajiyay iyadoo la raacayo qodobka 4734 / g ee Sharciga la lambariyay 3 xaaladdani waxay keenaysaa in jawiga tartanku uusan si buuxda u dhisnayn. Waxaa sidoo kale la go'aamiyay in hindisooyinka qaarkood, maadaama xisaabinta qarashka qiyaasta aan si dhab ah loo sameynin, waxaa jiray xaalado aysan jirin dalabyo ama dalabyo ka badan qarashka qiyaasta sidaas darteedna baajinta ayaa la sameeyay.
* Mugga iibsiga iyo waxqabadka maalgashiga ee TCDD Group si weyn ayey u ballaarisay. Sidaa daraadeed, sameynta qeexitaanka qaybta waaxda qaybta, qiimeynta iyo heerarka qaybta tareenka waa in si taxaddar leh looga fiirsado si loogu fuliyo wax soo iibsiga iyo maalgashiga qaab caafimaad qabta.
* Waxyaabaha ku saabsan wax soo iibsiga ee TCDD iyo kaabayaasheeda; Go'aanka "qiyaasta kharashka ilişkin ee xisaabinta iibka badeecadaha iyo adeegyada si waafaqsan heerka qiimaha hadda jira una dhow xaqiiqda, waxaa lagu talinayaa in si habsami leh loo adeegsado habab kale oo lagu faahfaahiyay qawaaniinta fulinta iyo sidoo kale qiyaasta qarashka ku baxa qaan-sheegashada borofishanka ee badanaa lagu isticmaalo ururada.
* Tan iyo soo iibsiga iyo mashaariicda maalgashiga ee TCDD iyo kaabayaasheeda waxay gaareen cabbirro aad u muhiim ah, waxaa lagu talinayaa in cilladaha habsami u socodka hannaanka wax soo iibsiga la baaro oo heerar la dejiyo oo la hirgeliyo si loo hubiyo in geeddi-socodka lagu soo gabagabeeyo jawi caafimaad iyo tartamo marka loo eego xarumaha, gobollada iyo kaabayaasha.
Maxkamada Warbixinta Xisaabaadka
Agaasimaha Guud ee shaqaalaha TCDD
Nidaamyada tareenada ee Istanbul waxay qaadaan 29 ee dadweynaha
3. Caqabada aan la arki karin ee garoonka